Hernia (အူကျခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hernia (အူကျခြင်း)
Hernia (အူကျခြင်း) ကဘာလဲ။
အူကျွံခြင်းသည် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ သို့မဟုတ် တစ်ရှူးများ ( အူအခွေ စသော) သည် သူတို့နှင့် မသက်ဆိုင်သော နေရာများသို့ တိုးထွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကြွက်သား နံရံရှိ အပေါက် သို့မဟုတ် ပျော့သောနေရာများကို တိုးပြီး အလုံးအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
အူကျွံခြင်းသည် ဖိအား စိုက်ထားသော အချိန်တွင်သာ ဖြစ် ပါက ပြန်သွင်း၍ ရသည်ဟုခေါ်ပြီး အန္တရာယ် မများလှပါ။
အပေါက်ထဲတွင် တစ်ရှူးများ ပိတ်မိပြီး ပြန်ဆွဲ၍ မရခြင်းကို ချုပ်နှောင်ထားသော အူကျွံခြင်းဟုခေါ်ပြီး ဆိုးရွားသော ပြဿ နာဖြစ်ပါသည်။ အန္တရာယ်အများဆုံး အူကျွံခြင်းမှာ လိမ်ညစ် ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိတ်မိသော တစ်ရှူးများသည် သွေးထောက်ပံ့မှု မရဘဲ သေဆုံးပါသည်။
Hernia (အူကျခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်အများဆုံးမှာ အပြင်ပိုင်း အူကျွံခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါင်ခြံတွင်ကျွံခြင်း နှင့် ချက်အနီးတွင် ကျွံ ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ချက်အနီးတွင်ကျွံခြင်းသည် အထူးသဖြင့် လမစေ့ဘဲမွေးသော ကလေးများ၊ အမျိုးသမီးများ နှင့် အချို့ ရောဂါများရှိသော ကလေးများတွင် အလွန်အဖြစ်များပါသည်။
ပေါင်ခြံတွင် ကျွံခြင်းသည် အမျိုးသမီးများနှင့် လမစေ့သော ကလေးများ ထက် အမျိုးသားများတွင် ပိုဖြစ်ပါသည်။ ကလေး များတွင် အဖြစ်အများဆုံး အတွင်းပိုင်း အူကျွံခြင်းများမှာ မွေးရာပါ ရင်ဝမ်းတား ကြွက်သားတွင်ကျွံခြင်း နှင့် အစာအိမ် ကျွံခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် အူကျွံမှု ဖြစ်ပွားခြင်းကို လျော့ချ နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Hernia (အူကျခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခုများ ရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်မိပါက ရောဂါလက္ခဏာများသည် အူကျွံမှု အမျိုးအစားအပေါ် မူ တည်ပါသည်။
ပေါင်ခြံ နှင့် ချက်အနီးတွင် ကျွံခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ သူ့အလိုလို ပျောက်ကင်းသွားနိုင်သော မနာကျင်ဘဲ ရောင်ရမ်း ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရောဂါ လက္ခဏာများသည် ငိုခြင်း၊ အားစိုက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်ခြင်း တွင် အသိသာဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်ခြံတွင် အူကျွံခြင်း သည် ယောက်ျာလေးများကို ကပ်ပယ်အိတ် (ဝှေးစေ့ထည့်ထားသော ) ကို ကြီးစေပါသည်။ မိန်းကလေးများတွင် မိန်းမအင်္ဂါ နှုတ်ခမ်း (မွေးလမ်းကြောင်း ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူး) ကို ရောင်ရမ်းစေနိုင် ပါသည်။
အတွင်းပိုင်း အူကျွံခြင်းသည် ရောဂါလက္ခဏာများ မပြ သော်လည်း အော့အန်ခြင်းနှင့် ရင်ပူခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ချုပ်နှောင်ထားသော အူကျွံခြင်းများသည် မာသော အလုံး အခဲများ၊ နာကျင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပိတ်ခြင်း နှင့် ယား ယံနာကျင်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
လိမ်ညစ်၍ ကျွံခြင်းသည် အဖျားတက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းနီရဲ ခြင်းနှင့် အလွန်နာကျင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထားသော အခြားလက္ခဏာ များလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Hernia (အူကျခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မွေးရာပါ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော ပေါင်ခြံတွင် အူကျွံခြင်း သည် ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် မှားယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ တိုက် ရိုက်ဖြစ်သော ပေါင်ခြံတွင် အူကျွံခြင်းသည် မွေးဖွားပြီးမှ ဖြစ်ပွားပါသည်။
ချက်အနီးတွင် အူကျွံခြင်းသည် ချက်အကွင်း ကောင်းစွာ မပိတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အခြား အူကျွံ ခြင်းများသည် အမြှေးပါး၊ ကြွက်သားနံရံ သို့မဟုတ် အခြား အစိတ်အပိုင်းများ ကောင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်မလာသောကြောင့် ဖြစ် ပွားပါသည်။ သို့မဟုတ် ထိုအစိတ်အပိုင်းများ ထိခိုက်မိပြီး လျော့ရဲလာသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Hernia (အူကျခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အူကျွံခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက်များစွာ ရှိပါ သည်။ ဥပမာ-
ကလေး။ လမစေ့ဘဲမွေးသော ကလေးများ နှင့် ကိုယ် အလေးချိန်နည်းစွာ မွေးသောကလေးများ။ လူမည်း မွေးကင်းစကလေးများသည် ချက်အနီးအူကျွံခြင်း ဖြစ် နိုင်ချေ အနည်းငယ် မြင့်ပါသည်။
အဝလွန်ခြင်း၊ ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း
လေးလံသော အရာများ မခြင်း
ဆက်တိုက် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း
Hernia (အူကျခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းယူခြင်းနှင့် လဲလျောင်းခြင်း နှင့် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း ပြုလုပ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေးခြင်း တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သွေးစစ်ခြင်း၊ laparoscopy လုပ်ခြင်း လို အပ်နိုင်ပါသည်။ အချို့ ဖြစ်ပွားမှုများတွင် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နှင့် ultrasonography စသော ပုံရိပ်ဖော် စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Hernia (အူကျခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် အူကျွံခြင်း အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ချက်အနီးတွင် အူကျွံခြင်းသည် မသက်မသာဖြစ်စေပြီး အများ စုသည် အသက် ၁-၂နှစ်တွင် အလိုလို ပိတ်သွားပါသည်။ ဆရာဝန်သည် ၎င်းတို့ကို လွယ်ကူစွာ တွန်းထည့်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် ထိုအူကျွံခြင်းများကို စောင့်ကြည့်ရန် အကြံပြု ပါသည်။
အူကျွံခြင်းသည် အသက် ၄-၅ နှစ်အထိ ပြန်လည် မကောင်းမှသာ သို့မဟုတ် အူများကို ညပ်မိပြီး ပိတ်ဆို့မှသာ ခွဲစိတ် ကုသမှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပေါင်ခြံတွင် အူကျွံခြင်း တွင် အူချုပ်နှောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ခွဲစိတ် ကုသမှု ကို ပြုလုပ်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် Hernia (အူကျွံခြင်း) ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် အူကျွံခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေး၏ အူကျွံခြင်းသည် အသက် ၂-၃နှစ်တွင် ပိုသေးသွားသလားကို စောင့်ကြည့်ပါ။
ခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင် ဆရာဝန်က သောက်ရန် ညွှန်ကြားထားသော အနာပျောက်ဆေးကို သင့်ကလေးကိုတိုက်ပါ။
ခွဲစိတ်မှုအပြီးတွင် သင့်ကလေးအား ချောင်းဆိုးခြင်း နှင့် နှာချေခြင်းကို ဖြစ်စေသော အသက်ရှူလမ်း ကြောင်း ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ချုပ်ရိုးများကို တင်းစေသည်။ မကြာခဏ လက်ဆေး ခြင်းသည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ရန် အ ကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။
ပေါင်ခြံတွင် အူကျွံခြင်းမှ အူချုပ်နှောင်ခြင်း ၏ ရောဂါ လက္ခဏာများကို လေ့လာပါ။ ကုသမှု ကြန့်ကြာခြင်း သည် ပြင်းထန်သော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။
ခွဲရာကို ပြန်လည်မကောင်းမွန် မချင်း သန့်ရှင်းခြောက် သွေ့အောင်ထားပါ။ သင်သည် သင့်ကလေး၏ လှုပ် ရှား ဆော့ကစားမှုကို အချိန် အနည်းငယ်တစ်ခုအထိ ကန့်သက်ရန် လိုပါသည်။
health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page1471.
Hernias. http://kidshealth.org/teen/diseases_conditions/digestive/hernias.html. Accessed July9, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, 2012. Print edition. Page 969.
Hernias. http://kidshealth.org/teen/diseases_conditions/digestive/hernias.html. Accessed July9, 2016.